अब जनप्रतिनिधीले सामाजिक सञ्जाल चलाउन नपाउने
Thu, Jul 9, 2020 at 8:07am
कर्णालीमा संक्रमित एक हजार ५ सय ५० मध्ये एक हजार २९१ डिस्चार्ज #आहा खबर# एसईईकाे नतिजा नै नआइ कक्षा ११ को भर्ना ? #आहा खबर# विश्वमा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै थपिए दुई लाख भन्दा बढी काेराेना संक्रमित #आहा खबर# कम्बोडियाले लगायाे कुकुरको मासुको व्यापारमा प्रतिबन्ध #आहा खबर# प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई भने, ‘प्रधानमन्त्री हुने भए चुनाव कुर्नुस्’ #आहा खबर# आजदेखि चार दिन यस वर्षकै ठूलाे पानी पर्ने, पूर्वतयारी अपनाउन आग्रह #आहा खबर# सीके राउतका दुई दर्जन बढी कार्यकर्ताले गरे पार्टी परित्यागको घोषणा #आहा खबर# महिनावारी ढिलाई हुनुका यस्ता छन् चार कारण #आहा खबर# डब्लुएचओबाट औपचारिक रुपमा बाहिरियो अमेरिका #आहा खबर# संकटको घडीमा मानवताको परीक्षण हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली #आहा खबर# अबको चार दिन यो वर्षकै बढी वर्षा, यी क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह #आहा खबर# ओली-प्रचण्डबीच झण्डै २ घण्टा छलफल, आज के भयो ? #आहा खबर# लकडाउनमै छापियो साढे तीन लाख लाइसेन्स #आहा खबर# उपत्यकामा २३ सहित थप २५५ जनामा कोरोना पुष्टि #आहा खबर# काँग्रेस महासमिति सदस्य महेन्द्र मल्ललाई पार्टीले गर्‍याे ५ वर्षे कारवाही #आहा खबर#
सोमबार, ६ असोज २०७६,	आहाखबर	1.79K
हेटौंडा, ६ असाेज ।
अब कार्यालय समयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालकाे प्रयाेग गर्न नपाउने भएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले कार्यालय समयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हाे । समितिको आइतबार बसेको ५० औं बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले कर्मचारी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यालय समयमा सामाजिक सञ्जालको चलाउन नपाउने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख खुलालले जानकारी दिए ।
कार्यालय समयमा सामाजिक सञ्जालमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी व्यस्त हुँदा सेवाप्रवाहमा समस्या परेको गुनासो आउन थालेपछि रोक लगाउने निर्णय गरेको खुलालले बताए । उनले भने–‘ कार्यालय समयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा समस्या आएको छ । सेवाप्रवाहको समयमा अन्यत्र व्यस्त हुनु राम्रो होइन् । त्यसैले रोक लगाउने निर्णय गरेका हौ ।’
बैठकले पहिलो चरणमा जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल चलाउन रोक लगाएको प्रमुख खुलालले बताए । आफ्नै कार्यालयका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कार्यालय समयलाई टाइम पासको रुपमा लिएको देखिएपछि बाध्य भएर रोक लगाउने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।
जिससमा अनिवार्य रोक लगाउने निर्णय गरेको र अन्य स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयलाई पनि कार्यान्वयन गर्न आव्हान गरेको खुलालले बताए । अब बस्ने स्थानीय तह समन्वय बैठकमा कार्यालयल समयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउन रोक लगाउने ऐजेण्डा लैजाने तयारीमा जिसस रहेको उल्लेख गरे । उनले सबै स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयमा यसलाई अभियानको रुपमा लगेर कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरे ।
बैठकमा उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, समन्वय अधिकारी कपिलप्रसाद उपाध्यायलगयात जिसस सदस्य एवम् कर्मचारीहरुको सहभागिता थियो ।
अमेरिकामा पनि टिकटकसहित चिनियाँ एपहरु माथि प्रतिबन्धको तयारी